Dhageyso Abu Mansoor Al-Amriiki fariintiisa
Thursday July 04, 2013 - 18:31:51 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Abuu Mansuur Al Amriiki oo ah hogaamiyaha Muhaajiriintii ka barbar dagaalami jirtay Maliishiyaadka Alshabaab ayaa dagaalyahana gurmada u diray Mukhtar Roobow oo la sheegay inay ku hareereeysan yihiin Maleeshiyo taabacsan Ahmed Godane. Halkaan ka dha
Abuu Mansuur Al Amriiki oo ah hogaamiyaha Muhaajiriintii ka barbar dagaalami jirtay Maliishiyaadka Alshabaab ayaa dagaalyahana gurmada u diray Mukhtar Roobow oo la sheegay inay ku hareereeysan yihiin Maleeshiyo taabacsan Ahmed Godane. Halkaan ka dhageyso ---- Halkaan ka rogo MP3 ---------- Abuu Mansoor Al -Amriki oo Waagacusub u soo diray cod uu soo marsiiyay sendspace-ka wuxuu sheegay in Mukhtar Roobow uu ka helay hiil la xiriiray inuu afkiisa ku difaacay sidaas darteedna uu isaga ku difaacayo gaashaandhig si uu abaalgud uga dhigo.
Dagaalyahanada ajaanibtaa jooga Somalia ayaa sheegay inay xaqiiqsadeen in dilalkii loo geystay Salah Nabhan, Fazul Cabdalla, Bilal Berjawi, Cabdalla Suudaani, Aden Hashi Eyrow, Abu Quteyba, Cabdalla Suudaani, Ibrahin Afgan, Macalin Burhan inuu ka danbeeyay hogaamiyaha Kooxda Shabaab Ahmed Cabdi Godane.
Abuu Mansuur wuxuu hadalkiisa ku sheegay in Ahmed Cabdi Godane u shaqeeyo Isreal,uuna qandaraas ku qabo dilida Mujaahidiinta Islaamka,.waxa uu ku sheegay .
Al Amriiki oo saldhig ka dhigtay Tuulada Raama cadeey ayaa guursaday gabar kasoo jeeda Beesha Hubeer ee Mirifle.
Al-Amriki oo la rumeeysan yahay inuu gacan ka helay Al-Qaacida wuxuu tuulada Raama Cadeey iyo miyigeeda ka hirgeliyay Wireless Internet ,wuxuuna halkaas iskugu geeyay dhamaan ajaaniibta ALQAEDA
Halkaan ka dhageyso hadalkiisa - .